70 Ireo laharam-bavaka famotsorana ho an'ny tena manokana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Toro-hevitra momba ny fanafahana samirery
Galatianina 5: 1:
1 Koa mahereza tsara amin'ny fahafahana izay nanafahan'i Kristy antsika, ary aza averin'ny famatorana indray.
Personal ny fanadiovana ara-panahy dia tena tsara indraindray. Betsaka ny Kristiana no mivavaka tsy miaro tena, mivavaka fotsiny rehefa iharan'ny fanafihana, ny fanafihan'ny devoly. Tokony ho takatsika fa ny vavaka dia fanamafisana ara-panahy ary rehefa mivavaka mandrakariva isika dia tsy ho mora voan'ny fanafihan'ny devoly. Ny fivavahana ao anaty sy ivelan'ny vanim-potoana dia miaro antsika amin'ny zana-tsain'ny maizina. Hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: 'mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy' Mat. 26:41. Mivavaka ianao mba handresena fakam-panahy, tsy miandry fanandramana ianao vao mivavaka. Nanangona teboka vavaka fanafahana manokana 70 aho, handroahana anao manokana. Ity teboka vavaka fanafahana anao manokana ity dia ny hamelomana indray ny doro-bavaka amin'ny fiainanao indray.
Nasain'i Jesoa hivavaka isika nefa tsy ho reraka na kivy, Lioka 18: 1. Tsy maintsy mitazona ny afo ao anaty alim-bavaka isika, na inona na inona manakana anao tsy hivavaka, afaka manakana anao tsy hitso-drano. Rehefa mitsahatra tsy hivavaka ianao dia lasa babo ho an'ny devoly. Ity teboka vavaka amin'ny fanafahana manokana ity dia hanakorontanana ireo hetsika rehetra ataon'ny fanjakan'ny haizina amin'ny fiainanao. Izy io dia hanafaka anao amin'ny fanandevozana rehetra no nanirian'ny devoly anao. Rehefa ataonao am-pinoana io vavaka io, dia ho fongotra amin'ny fahaterahan'i Jesosy ny fahorianao rehetra amin'ny devoly amin'ny fiainanao. Ny fifehezanao ny devoly sy ny demoniany dia haorina na haorina amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Manohitra ny fanoherana rehetra aho, manenjika ny mpanenjika rehetra aho, manenjika ny mpampahory rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Mitsangàna, ento ny zioganao ary maty, amin'ny anaran'i Jesosy, ny mpanamboatra zioga rehetra.
3. Manafaka ny tenako amin'ny fahalotoan'ny demonia amin'ny razana rehetra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Afaho amin'ny fahalotoan'ny demonia ny tenako, avy amin'ny fivavahan'ny ray aman-dreniko, amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Manafaka ny tenako amin'ny fandotoana demony aho, izay avy amin'ny firotsahako taloha tamin'ny fivavahan'ny demonia, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Miala amin'ny sampy sy ny fifandraisana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
7. Manafaka ny tenako aho, amin'ny fandotoana nofy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ny fanafihan'i satana rehetra, manohitra ny fiainako amin'ny nofiko, dia hivadika ho fandresena, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Ny renirano rehetra, hazo, ala, mpiaradia ratsy, mpanenjika ratsy, sarin'ny havana maty, bibilava, vadin'ny fanahy, vadin'ny fanahy ary masquerades namboarina tamiko tamin'ny nofy, dia ho fongotra tanteraka amin'ny herin'ny ran'i Jesosy Tompo.
10. Ny fambolena ratsy rehetra amin'ny fiainako, mivoaha miaraka amin'ny fakanao rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy!
11. Ireo olon-dratsy ao amin'ny vatako, mivoaha amin'ny toeram-piafenanao, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Mampifandray ireo fifandraisana tsy fantatra na tsy mahatsiaro tena aho miaraka amin'ny mpaka demonia, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ry Tompo, avelao ny fomba rehetra hihinana na hisotro poizina ara-panahy hikatona, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Mangotraka aho sady mandoa zavatra hohanina amin'ny latabatry ny devoly, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Ireo fitaovana ratsy rehetra mivezivezy amin'ny rà fandriako, mivoaka ary manangona afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Manarona ny ran'i Jesosy aho.
17. afo ny Fanahy Masina, diovy aho hatrany an-tampon'ny lohako ka hatramin'ny faladiako. Atombohy ny milaza ireo taova rehetra ao amin'ny vatanao; ny voa, ny atinao, ny tsina, ny ra, sns. (Ento ity tsimoramora ity ary manantenà fa hadio ny Fanahy Masina manadio anao).
18. Miala amin'ny faniriana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
19. Manafaka ny tenako amin'ny poizina rehetra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
20. Manafaka ny tenako amin'ny fanombohan'ny razana rehetra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
21. Manafaka ny tenako amin'ny fandaharana ratsy rehetra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Manafaka ny tenako amin'ny karazana fahantrana sy ny tsy fahampiana aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Manafaka ny tenako amin'ny fandrika satana rehetra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
24. Manafaka ny tenako amin'ny herin'ny famosaviana rehetra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
25. Manafaka ny tenako amin'ny fitahirizana sampy rehetra aho hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Manafaka ny tenako amin'ny karazana fahalotoana ara-pananahana aho hatramin'ny nanorenako ny fiainako, ao amin'ny
27. Manafaka ny tenako amin'ny sangan'asan'ny mpanao ody rehetra, hatramin'ny nanorenana ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Manafaka ny tenako amin'ny fanahin'ny fampirafesana, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
29. Manafaka ny tenako amin'ny fanandevozana kolontsaina aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
30. Manafaka ny tenako amin'ny fanenjehana rehetra amin'ny nofy aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
31. Manafaka ny tenako amin'ny fianakavian'ny fianakaviana rehetra, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
32. Manafaka ny tenako amin'ny ozona rehetra avy amin'ny razana aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
33. Manafaka ny tenako amin'ny sombin-tsaina rehetra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
34. Manafaka ny tenako amin'ny fanahy rehetra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
35. Manafaka ny tenako amin'ny fanapahana ny herin'ny an-dranomasina, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Manafaka ny tenako amin'ny fanahin'ny fihatsarambelatsihy, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
37. Manafaka ny tenako amin'ny fanahy ratsy aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
38. Manafaka amin'ny tenako tsy amin'ny fahombiazana aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
39. Manafaka amin'ny tenako aho, avy amin'ny fototry ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Manafaka ny tenako amin'ny fanahin'ny fahafatesana sy ny helo aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Manafaka ny tenako amin'ny satroka mpamosavy rehetra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Manafaka ny tenako amin'ny fandotoana ra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
43. Manafaka ny tenako amin'ny fanahin'ny fahalotoana aho, hatramin'ny nanorenan'ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
44. Manafaka ny tenako amin'ny voa rehetra tsy an-kery aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Manafaka ny tenako amin'ny karazana endrik'anarana rehetra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
46. ​​Manafaka ny tenako amin'ny henatra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
48. Manafaka ny tenako amin'ny tsy fahombiazako amin'ny faran'ny fahagagana aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
49. Manafaka ny tenako amin'ny fahajambana ara-panahy aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
50. Manafaka ny tenako amin'ny marenina ara-panahy aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
51. Manafaka ny tenako amin'ny famarana tsy mahomby aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
52. Manafaka ny tenako amin'ny ozona sy ny fiteny aho hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
53. Manafaka ny tenako amin'ny fanahy mahazatra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
54. Manafaka ny tenako amin'ny sangan-dratsy aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
55. Manafaka ny tenako amin'ny fanekena an-dranomasina aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
56. Manafaka amin'ny tenanao rehetra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
57. Manafaka ny tenako amin'ny fanafihan'ny demony rehetra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
58. Manafaka ny tenako amin'ny fanahin'ny maty aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
59. Manafaka ny tenako amin'ny fomba fiaina rehetra aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
60. Manafaka ny tenako amin'ny fahafatesana tsy hay hadino aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
61. Manafaka ny tenako amin'ny tsy fahatomombanana ara-tsaina aho nanomboka tamin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
62. Manafaka ny tenako amin'ny zana-tsofin-dàlana rehetra aho, hatramin'ny nanorenan'ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
63. Manafaka ny tenako amin'ny aretina sy ny aretina aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
64. Manafaka ny tenako amin'ny ozona ray aman-dreny, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
65. Manafaka ny tenako amin'ny fahafatesana mahery vaika aho, hatramin'ny nanorenana ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
66. Manafaka ny tenako amin'ny fitondran-tena tsy mahazatra aho, hatramin'ny nanorenako ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
67. Manafaka ny tenako amin'ny fahatezerana tsy voafehy aho, hatramin'ny nanorenan'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
68. Manafaka ny tenako amin'ny feo hafahafa satana aho, hatramin'ny nanorenan'ny fiainako, tamin'ny anaran'i Jesosy.
69. Niala tamin'ny fanahy foko sy ozona rehetra aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
70. Nisaraka tamin'ny fanahy teratany sy ozona rehetra aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, misaotra anao aho noho ny fanafahana ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka amin-kery atao amin'i Beelzebub
Next lahatsoratra30 Vavaky ny fanafahana fototra
ENINA 1 aogositra 2019 Amin'ny 10:36 hariva
Nianarako bebe kokoa momba ny Fanjakan'Andriamanitra,
Misaotra amin'ny fitarihana
Mpanoratra Gillian 26 aogositra 2020 Amin'ny 12:12 hariva
Misaotra anao tamin'ireto vavaka rehetra ireto dia tena nanampy ahy tokoa izy ireo. Faly aho fa nahita ity tranonkala ity. Misaotra avy amin'ny foko rehetra. Samy tahian'Andriamanitra daholo ianao ❤️ ppl 😊
50 Mivavaka am-pankasitrahana manohitra ny fahavalony any am-piasana
Salamo 150 Ny dikan'ny hoe Andininy